Isaziso sezomthetho | Uhambo lwe-Absolut | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuhamba kwe-Absolut Yeyomnatha wesango Iindaba zeBlogs, Inkampani ephethwe Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB 2008 SL, CIF: B85537785, nedilesi eC / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
yatsho idilesi yeposi
imeyile contact (e) blog (iphuzu) com
ifowuni (+34) 902 909 238
le fomu yoqhakamshelwano
Ukukhuselwa kwedatha yobuqu
Iinkcukacha zonxibelelwano zomntu ophetheyo: UMiguel Ángel Gaton onxibelelana naye nge-imeyile miguel (at) actualityblog (dot) com
Amalungelo akho okukhusela idatha
Uwasebenzisa njani amalungelo akho: Ungathumela unxibelelwano olubhaliweyo kwi-ofisi ebhalisiweyo ye-AB Internet Networks 2008 SL okanye kwidilesi ye-imeyile eboniswe kwisihloko sesi saziso somthetho, kubandakanya kuzo zombini iimeko ifotokopi yesazisi sakho okanye olunye uxwebhu olufanayo, ukuze ucele ukusetyenziswa amalungelo alandelayo:
Ilungelo lokucela ukufikelela kwidatha yobuqu: ungabuza i-AB Internet Networks 2008 SL ukuba le nkampani inyanga idatha yakho.
Ilungelo lokucela ukulungiswa (ukuba azichanekanga).
Ilungelo lokucela umda kunyango lwakhoKwimeko apho ziya kugcinwa kuphela ziiNethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL ukulungiselela ukusetyenziswa okanye ukuzikhusela kwamabango
Ilungelo lokungavumi unyango: Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL ziyayeka ukuqhubekeka idatha ngendlela obonisa ngayo, ngaphandle kokuba kungenxa yezizathu ezivakalayo okanye ukwenziwa okanye ukuzikhusela kwamabango anokuthi kufuneka aqhubeke nokusetyenzwa.
Ilungelo ekuphatheni idatha: Kwimeko apho ufuna ukuba idatha yakho iqhutyelwe yenye inkampani, i-AB Internet Networks 2008 SL iya kulungiselela ukuthwala kwedatha yakho kumphathi omtsha.
Ilungelo lokususa idatha: Ngaphandle kokunyanzelwa ngumthetho ziya kucinywa emva koqinisekiso lwakho.
Iimodeli, iifom kunye nolwazi oluthe kratya malunga namalungelo akho: Iwebhusayithi esemthethweni yeArhente yaseSpain yoKhuseleko lweDatha
Ukubakho kokurhoxisa imvume: Kwimeko apho unike imvume ngayo nayiphi na injongo, unelungelo lokuyirhoxisa nangaliphi na ixesha, ngaphandle kokuchaphazela ukuba semthethweni konyango olusekwe kwimvume ngaphambi kokurhoxa.
Ungasifaka kanjani isikhalazo kuGunyaziwe woLawulo: Ukuba ucinga ukuba kukho ingxaki ngendlela i-AB Internet Networks 2008 SL eyiphatha ngayo idatha yakho, ungathumela amabango akho kuMphathi woKhuseleko we-AB Internet Networks 2008 SL (eboniswe ngasentla) okanye kwi igunya lokukhusela idatha iyahambelana, ekubeni IArhente yaseSpain yoKhuseleko lweDatha, le iboniswe kwimeko yaseSpain.
Ilungelo lokulibaleka kunye nokufikelela kwidatha yakho yobuqu
Ngawo onke amaxesha uya kuba nelungelo lokujonga kwakhona, ukufumana kwakhona, ukungachazi amagama kunye / okanye ukucima, iphelele okanye inxenye, idatha egcinwe kwiWebhusayithi. Kufuneka uthumele i-imeyile contacto@actualidadblog.com kwaye uyicele.
Idatha eyahlukileyo: Idatha eyahluliweyo iya kugcinwa ngaphandle kwexesha lokususa.
Idatha yababhalisi kwisondlo nge-imeyile: Ukusukela ngalo mzuzu umsebenzisi abhalisile ade azikhuphe.
Idatha yobhaliso kwincwadana yeendaba: Ukusukela ngalo mzuzu umsebenzisi abhalisile ade azikhuphe.
Idatha yomsebenzisi elayishwe yi-AB Internet Networks 2008 SL kumaphepha kunye neeprofayili kuthungelwano lwentlalo: Ukusukela ngalo mzuzu umsebenzisi anikezela ngemvume yakhe de bayirhoxe.
Imfihlo kunye nokhuseleko lwedatha
Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB ze-2008 SL zizinikele ekusebenziseni idatha, ukuya behlonipha iimfihlo zabo kunye nokuzisebenzisa ngokungqinelana neenjongo zazo, kunye nokuthobela uxanduva lwazo lokuzigcina kunye nokulungelelanisa onke amanyathelo ukunqanda utshintsho, ilahleko, unyango okanye ukufikelela okungagunyaziswanga, ngokuhambelana nemimiselo yoMthetho wasebukhosini 1720 / 2007 ye-21 kaDisemba, evuma iMigaqo yoPhuhliso loMthetho we-Organic 15/1999 kaDisemba 13, kuKhuselo lweDatha yobuNtu.
Uqinisekisa ukuba idatha yobuqu ebonelelwe ngeefom iyinyani, inyanzelekile ukuba unxibelelane naluphi na utshintsho kubo. Ngokufanayo, uqinisekisa ukuba lonke ulwazi olunikiweyo luyahambelana nemeko yakho yokwenyani, ukuba ihlaziyiwe kwaye ichanekile.
Ukongeza, kufuneka ugcine idatha yakho ihlaziywa ngalo lonke ixesha, uxanduva lwakho kuphela kukungachaneki okanye ubuxoki bedatha ebonelelweyo kunye nomonakalo onokubangelwa yile AB Networks 2008 Network njengomnini wale webhusayithi, okanye kubantu besithathu ngenxa Ukusetyenziswa kokuthethwa.
Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL zamkela amanyathelo okhuseleko afanelekileyo okufumanisa ubukho beentsholongwane, uhlaselo lwamandla angenabuntu kunye nenaliti yekhowudi.
Nangona kunjalo, kufuneka uqaphele ukuba amanyathelo okhuseleko kwiinkqubo zekhompyuter kwi-Intanethi awathembakali ngokupheleleyo kwaye, ke, ii-Intanethi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL azinakuqinisekisa ukungabikho kweentsholongwane okanye ezinye izinto ezinokubangela utshintsho kwiinkqubo zekhompyuter. (Isoftware kunye nezixhobo) zoMsebenzisi okanye kumaxwebhu e-elektroniki kunye neefayile eziqulethwe apho.
Ngaphandle koku, ukuzama qinisekisa ukhuseleko kunye nemfihlo yedatha yakho yobuquIwebhusayithi inenkqubo yokujonga ukhuseleko esebenzayo ukunika ingxelo ngomsebenzi ngamnye kunye nolwaphulo olunokwenzeka kukhuseleko lwedatha yomsebenzisi.
Kwimeko yokubhaqa nakuphi na ukophula umthetho, ii-Intanethi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 zithembisa uku Yazisa abasebenzisi kwisithuba seeyure ezingama-72.
Loluphi ulwazi esiluqokelela kubasebenzisi kwaye silusebenzisela ntoni
Zonke iimveliso kunye neenkonzo ezinikezelwa kwiwebhusayithi zibhekisa kwiifom zonxibelelwano, iifom zezimvo kunye neefom zokwenza ubhaliso lwabasebenzisi, ukubhaliswa kweleta yeendaba kunye / okanye iiodolo zokuthenga.
Le webhusayithi ihlala ifuna imvume yabasebenzisi yokuqhubekeka idatha yabo yobuqu ngeenjongo ezichaziweyo.
Unelungelo lokurhoxisa imvume yakho nangaliphi na ixesha.
Ingxelo yemisebenzi yokulungisa idatha
Iwebhu kunye nokubamba: Le webhusayithi ine-SSL TLS v.1.2 encryption evumela ukuthunyelwa okukhuselekileyo kwedatha yobuqu ngokusebenzisa iifom zokunxibelelana ezisemgangathweni, ezibanjelwe kwiiseva ezenziwa zii-AB Internet Networks 2008 SL ezinesivumelwano kwi-Occentus Networks.
Idatha eqokelelwe kwiwebhu: Idatha yobuqu eqokelelweyo iya kuba phantsi koqwalaselo oluzenzekelayo kwaye ibandakanywe kwiifayile ezihambelana nazo ze-AB Internet Networks 2008 SL.
Siza kufumana i-IP yakho, eya kuthi isetyenziselwe ukungqinisisa imvelaphi yomyalezo ukuze sikunike ulwazi, ukhuseleko kwizimvo ze-SPAM kunye nokufumanisa izitenxo ezinokwenzeka (umzekelo: amaqela aphikisayo kwityala elinye bhala kwiwebhusayithi kwi-IP efanayo), njengedatha enxulumene ne-ISP yakho.
Ngokufanayo, unokusinika idatha yakho nge-imeyile kunye nezinye iindlela zonxibelelwano eziboniswe kwicandelo loqhakamshelwano.
IFomu yokuphendula: Kwiwebhu kunokwenzeka ukuba abasebenzisi bashiye izimvo kupapasho lwendawo. Kukho ikuki egcina idatha ebonelelwe ngumsebenzisi ukuze kungabikho mfuneko yokuyifaka kwakhona kutyelelo ngalunye olutsha kwaye nedilesi ye-imeyile, igama, iwebhusayithi kunye nedilesi ye-IP ziqokelelwa ngaphakathi. Idatha igcinwe kwiiseva zeNethiwekhi zeOccentus.
Ubhaliso loMsebenzisi: Awavumelekanga ngaphandle kokuba kucelwe gca.
Ifom yokuthengaUkufikelela kwiimveliso kunye neenkonzo ezinikezelwa kwiivenkile zethu ezikwi-intanethi, umsebenzisi unefomu yokuthenga ngokuxhomekeke kwiimeko zesivumelwano ezichazwe kumgaqo-nkqubo wethu apho ulwazi lokunxibelelana kunye nentlawulo luya kufuneka. Idatha igcinwe kwiiseva zeNethiwekhi zeOccentus.
Siqokelela ulwazi malunga nawe ngexesha lokuphuma kwivenkile yethu. Olu lwazi lunokubandakanya, ayisiyiyo le kuphela igama lakho, idilesi, i-imeyile, umnxeba, iinkcukacha zokuhlawula kunye nezinye eziyimfuneko ukwenza ii-odolo zakho.
Ukulawulwa kwale datha kusivumela ukuba:
Thumela ulwazi olubalulekileyo malunga neakhawunti yakho / iodolo / inkonzo.
Phendula kwizicelo zakho, izikhalazo kunye nezicelo zembuyekezo.
Inkqubo yokuhlawula kunye nokuphepha ukuthengiselana ngobuqhetseba.
Qwalasela kwaye ulawule iakhawunti yakho, ikunike inkonzo yezobugcisa kunye neyabathengi, kwaye uqinisekise isazisi sakho.
Ukongeza, sinokuqokelela olu lwazi lulandelayo:
Indawo kunye nedatha yezithuthi (kubandakanya idilesi ye-IP kunye nesikhangeli) ukuba ufaka iodolo, okanye ukuba sifuna ukuqikelela irhafu kunye neendleko zokuhambisa ngokusekwe kwindawo okuyo.
Amaphepha emveliso atyelelwe kunye nomxholo ojongiweyo ngelixa iseshoni yakho isebenza.
Izimvo zakho kunye nokuphononongwa kwemveliso ukuba ukhetha ukubashiya.
Ukuthumela idilesi ukuba ucela iindleko zokuhambisa ngaphambi kokuba uthenge ngelixa iseshoni yakho isebenza.
Iikuki eziyimfuneko ukugcina umkhondo wemixholo yenqwelo yakho ngelixa iseshoni yakho isebenza.
I-imeyile kunye negama lokugqitha leakhawunti yakho ukuvumela ukuba ungene kwiakhawunti yakho, ukuba unayo.
Ukuba wenza iakhawunti, sigcina igama lakho, idilesi kunye nenombolo yomnxeba, ukuze sizisebenzise kwii-odolo zakho zexesha elizayo.
Iifom zokubhaliselwa kwincwadana: Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB ze-2008 SL zisebenzisa i-Sendgrid, iFeedburner okanye iMailchimp yeenkonzo zokuhanjiswa kweleta, egcina idatha yakho ye-imeyile, igama kunye nokwamkelwa kobhaliso. Ungarhoxisa umrhumo kwincwadana yeendaba nangaliphi na ixesha ngekhonkco elithile elisezantsi kwinto nganye oyifumeneyo
Imeyili: Umboneleli ngenkonzo ye-imeyile nguSendgrid.
Umyalezo wangoku: Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL aziboneleli ngenkonzo ngokuthumela imiyalezo kwangoko, ezinje ngeWhatsApp, iFacebook Messenger okanye iLine.
Ababoneleli ngeenkonzo zokuhlawula: Ngewebhu, unokufikelela, ngokusebenzisa amakhonkco, kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu, ezinje PayPal o ngombala, ukwenza iintlawulo zeenkonzo ezinikezelwa yi-AB Internet Networks 2008 SL. Akukho xesha apho abasebenzi be-Intanethi ye-AB ka-2008 be-SL banokufikelela kwiinkcukacha zebhanki (umzekelo, inombolo yekhadi letyala) olinike abantu besithathu.
Umxholo olungisiweyo kwezinye iiwebhusayithi
Amanqaku kwiwebhu anokubandakanya umxholo olungisiweyo (umz. Iividiyo, imifanekiso, amanqaku njl.njl.). Umxholo ofakwe kwezinye iiwebhusayithi uziphatha ngendlela efanayo nokuba undwendwe lundwendwele enye iwebhusayithi.
Ezi webhusayithi zinokuqokelela idatha emalunga nawe, zisebenzise iicookies, zilandele umkhondo wesithathu, kwaye zibeke iliso kunxibelelwano lwakho nomxholo ofakiwe, kubandakanya ukulandelela unxibelelwano lwakho nomxholo ofakelwe ukuba uneakhawunti okanye uqhagamshele kuloo webhusayithi.
Ezinye iinkonzo: Iinkonzo ezithile ezinikezelwa yile webhusayithi zinokuqulatha iimeko ezithile kunye nezibonelelo ezithile ngokubhekisele kukhuseleko lwedatha yobuqu. Kubalulekile ukuyifunda kwaye uyamkele ngaphambi kokucela inkonzo ekuthethwa ngayo.
Injongo kunye nokusemthethweni: Injongo yokulungisa le datha iya kuba kukubonelela ngolwazi okanye iinkonzo ozifunayo.
Ubukho kwiinethiwekhi: Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL zineenkangeleko kwezinye zonxibelelwano eziphambili kwi-Intanethi.
Injongo kunye nokusemthethweni: Unyango i-AB Internet Networks ka-2008 SL eya kulwenza kunye nedatha kuthungelwano ngalunye olukhankanyiweyo ngasentla, iya kuba lolona luvumelekileyo kuthungelwano lwentlalo kwiinkangeleko zenkampani. Yiyo loo nto i-AB Internet Networks 2008 SL inokwazisa, xa umthetho ungakuthinteli, abalandeli bayo nangayiphi na indlela ukuba inethiwekhi yentlalo ivumele malunga nemisebenzi yayo, imiboniso, unikezelo, kunye nokubonelela ngenkonzo yabathengi eyenzelwe wena.
Ukukhutshwa kwedatha: Akukho meko iya kuthi i-AB Internet Networks 2008 SL ikhuphe idatha kuthungelwano lwentlalo, ngaphandle kokuba imvume yomsebenzisi ifunyenwe ngokucacileyo nangokucacileyo ukuba yenze njalo.
Amalungelo: Xa, ngenxa yobume bezonxibelelwano zentlalo, ukusetyenziswa okusebenzayo kwamalungelo okhuselo lwedatha kumlandeli kuxhomekeke ekuguqulweni kweprofayili yobuqu yale nto, i-AB Internet Networks 2008 SL iyakukunceda kwaye ikucebise ngaloo nto yamathuba ayo.
Iiprosesa ezingaphandle kwe-EU
Imeyile. Iinkonzo ze-imeyile ze-AB ze-Intanethi zika-2008 ze-SL zibonelelwa kusetyenziswa iinkonzo ze-Sendgrid.
Iinethiwekhi zentlalo. Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL zisebenzisa uthungelwano lwaseMelika iYouTube, iFacebook, iTwitter, i-Instagram, iPinterest, iBhodi yeFlipboard ekwenziwa kuyo idatha yamanye amazwe, yohlalutyo kunye nobugcisa ngokunxulumene newebhusayithi ekwiseva zayo I-AB Internet Networks 2008 SL iphatha idatha ethi, ngabo, abasebenzisi, ababhalisi okanye abahamba ngeenqanawa bayise kwifemu ye-Intanethi ye-Intanethi ka-2008 SL okanye babelane ngayo.
Ababoneleli ngeentlawulo. Ukuze uhlawule PayPal o ngombalaIinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL ziya kuthumela idatha eyimfuneko ngokungqongqo yezo nkqubo kwiinkqubo zokuhlawulwa kwesicelo sokuhlawula esihambelanayo.
Ulwazi lwakho lukhuselwe ngokwemigaqo yethu yabucala kunye neekuki. Ngokwenza umrhumo okanye ukubonelela ngolwazi lwakho lwentlawulo, uyaqonda kwaye wamkele umgaqo-nkqubo wabucala kunye neekuki.
Uya kuhlala unelungelo lokufikelela, ukulungiswa, ukususwa, ukusikelwa umda, ukuthwala kunye nokulibala idatha yakho.
Ukusukela oko ubhalisa njengomsebenzisi kule webhusayithi, i-AB Internet Networks 2008 SL inakho ukufikelela kwi: Igama lomsebenzisi kunye ne-imeyile, idilesi ye-IP, idilesi yeposi, i-ID / i-CIF kunye nolwazi lokuhlawula.
Kwimeko nayiphi na into, i-AB Internet Networks 2008 SL inelungelo lokuguqula, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso sangaphambili, kodwa ukwazisa, ukuhanjiswa kunye noqwalaselo lwewebhusayithi olufana nesi saziso somthetho.
Ukuzibophelela kunye nokuzibophelela kubasebenzisi bethu
Ukufikelela kunye / okanye ukusetyenziswa kwale webhusayithi kuyenza nakubani na oyenzayo imeko yomsebenzisi, eyamkela, ukusuka kulo mzuzu, ngokupheleleyo nangaphandle kokubhukisha, esi saziso somthetho ngokunxulumene neenkonzo ezithile kunye nemixholo yewebhusayithi.
Kusetyenziso lwale webhusayithi, umsebenzisi akazibopheleli ekwenzeni nayiphi na into enokonakalisa umfanekiso, umdla kunye namalungelo e-AB Internet Networks 2008 SL okanye umntu wesithathu okanye onokonakalisa, ukukhubaza okanye ukulayisha ngaphezulu isango okanye ukuthintela , nangayiphi na imeko, ukusetyenziswa kwesiqhelo kwewebhu.
Umgaqo-nkqubo wethu wabucala uchaza indlela esiyiqokelela ngayo, siyigcina okanye siyisebenzise ngayo inkcazelo esiyiqokelelayo ngeenkonzo ezahlukeneyo okanye amaphepha akhoyo kule ndawo. Kubalulekile ukuba uqonde ukuba loluphi ulwazi esiluqokelelayo kunye nendlela esilisebenzisa ngayo kuba ukufikelela kule ndawo kuthetha ukwamkelwa komgaqo-nkqubo wabucala.
Ukufikelela kuyo kunokubandakanya ukusetyenziswa cookies. I cookies Zizinto ezincinci zolwazi ezigcinwe kwisikhangeli esisetyenziswa ngumsebenzisi ngamnye ukuze umncedisi akhumbule ulwazi oluthile anokulusebenzisa kamva. Olu lwazi likuvumela ukuba uchongwe njengomsebenzisi othile kwaye likuvumela ukuba ugcine izinto ozithandayo, kunye nolwazi lobuchwephesha njengotyelelo okanye amaphepha athile owatyelelayo.
Abo basebenzisi abanqweneli ukufumana cookies okanye ufuna ukwaziswa ngaphambi kokuba zigcinwe kwikhompyuter yakho, ungaqwalasela isikhangeli sakho ngale njongo.
Uninzi lwezikhangeli zanamhlanje zivumela ulawulo lwe cookies ngeendlela ezi-3 ezahlukeneyo:
Las cookies azamkelwa.
Isikhangeli sibuza umsebenzisi ukuba samkele nganye Cookie.
Las cookies zisoloko zamkelwe.
Isikhangeli sinokubandakanya ukubanakho ukucacisa ngcono ukuba yintoni cookieskufuneka yamkelwe kwaye kungenjalo. Ngokukodwa, umsebenzisi ngokwesiqhelo unokwamkela naluphi na olu khetho lulandelayo:
yale i cookies kwemimandla ethile;
yale i cookies kubantu besithathu;
kwamkela cookies njengezingaqhubeki (ziyasuswa xa isikhangeli sivaliwe);
vumela iseva ukuba yenze cookies Kwisizinda esahlukileyo.
UGoogle, njengomboneleli weqabane, usebenzisa ikuki ukuhambisa iintengiso kwiwebhu.
Unokukhubaza ukusetyenziswa kwecookie ye-DART kwinkqubo yentengiso kaGoogle ngokufikelela kwifayile ye Iziko labucala likaGoogle.
Ukongeza, iibrawuza zinokuvumela abasebenzisi ukuba bajonge kwaye bacime cookies ngokukodwa.
Unolwazi oluthe kratya malunga cookies kwaye: Wikipedia
Le ndawo inokubamba iindwendwe Iibhikhoni zewebhu (kwaziwa njenge Iibhugi zewebhu). Inkqubo ye- Iibhikhoni zewebhu zihlala ziyimifanekiso emincinci yepikseli enye nge-pixel enye, ebonakalayo okanye engabonakaliyo, ibekwe ngaphakathi kwikhowudi yemithombo yamaphepha ewebhu esiza. Inkqubo ye- Iibhikhoni zewebhu khonza kwaye zisetyenziswa ngendlela efanayo ne cookies. Ukongeza, i Iibhikhoni zewebhu Zihlala zisetyenziselwa ukulinganisa ukugcwala kwabasebenzisi abatyelele iphepha lewebhu kwaye bakwazi ukufumana iphethini yabasebenzisi besiza.
Unolwazi oluthe kratya malunga Iibhikhoni zewebhu kwaye: Wikipedia
Ngamanye amaxesha, sabelana ngolwazi malunga neendwendwe kule ndawo ngokungaziwa okanye ngokudibeneyo nabantu besithathu abanjengabathengisi, abaxhasi, okanye abaphicothi zincwadi ngenjongo enye yokuphucula iinkonzo zethu. Yonke le misebenzi yokulungisa iya kulawulwa ngokwemigaqo yezomthetho kwaye onke amalungelo akho malunga nokukhuselwa kwedatha aya kuhlonitshwa ngokwemigaqo yangoku.
Indawo ilinganisa izithuthi ngezisombululo ezahlukeneyo onokuzisebenzisa cookies o Iibhikhoni zewebhu ukuhlalutya okwenzekayo kumaphepha ethu. Ngoku sisebenzisa ezi zisombululo zilandelayo ukulinganisa ukugcwala kwale ndawo. Ungabona ulwazi oluthe kratya malunga nomgaqo-nkqubo wabucala kwisisombululo ngasinye esisetyenziselwe le njongo:
Google (Uhlalutyo): Umgaqo-nkqubo wabucala woHlaziyo lukaGoogle
I-Automattic / i-Quantcast (iiJetPack Stats): Umgaqo-nkqubo wabucala we-Automattic y Quantcast.
Disqus (inkqubo yokubeka izimvo): Umgaqo-nkqubo wabucala we-Disqus
Le ndawo inokubamba iintengiso zayo, abaxhasi, okanye uthungelwano lwentengiso. Le ntengiso iboniswa ziiseva zentengiso ezikwayisebenzisayo cookies ukubonisa umxholo wentengiso onxulumene nabasebenzisi. Ngasinye kwezi seva zentengiso zinomgaqo-nkqubo wazo wabucala, onokubonwa kuwo kumaphepha ewebhu.
Las cookies Ziifayile ezenziwe kwisikhangeli somsebenzisi ukurekhoda imisebenzi yazo kwiWebhusayithi kwaye zivumele ukuhamba okungaphezulu kwamanzi kunye nokwenzelwe umntu.
Cookies igama Injongo Olunye ulwazi
__utmz Iqokelela ulwazi olungaziwayo kuhambo lwabasebenzisi kwiwebhusayithi ukuze yazi imvelaphi yotyelelo kunye nolunye ulwazi olufanayo. Okwangoku asizisebenzisi ezi kuki. - IZiko laBucala likaGoogle
-Uhlalutyo lukaGoogle lokuphuma kwiplagi
Google Adsense, Cofa kabini, DART __iigadi Qokelela ulwazi malunga nokuhamba komsebenzisi ukuze ukhonze intengiso - Umgaqo-nkqubo wabucala kaGoogle Adsense
Ukuzenzekelayo, iQuantcast kunye neDisk __qta
uvavanyoCookie Iqokelela ulwazi olungaziwayo malunga nokuhamba kwabasebenzisi kwiwebhusayithi ukuze bazi imvelaphi yotyelelo kunye nolunye ulwazi olufanayo. - Umgaqo-nkqubo wabucala weQuantcast
Yongeza le __atuvc Ikuki __atuvc isetyenziswa yinkqubo yokwabelana noluntu ngeAdthth ukuqinisekisa ukuba abasebenzisi bayayibona indawo ekwabelwana ngayo esidityanisiweyo kumaqhosha entlalontle ewebhusayithi ehlaziywe ngokuchanekileyo. - Umgaqo-nkqubo wabucala we-Addthis
Ukusebenzisa leWebhusayithi akufuneki ukufaka cookies. Umsebenzisi akakwazi ukubamkela okanye ukumisela isikhangeli sabo ukuze sibathintele kwaye, apho kufanelekileyo, sibasuse.
Kukho ii-cookies ezihambelana neenethiwekhi zentlalo ezisetyenziswa yile webhusayithi zinemigaqo-nkqubo yazo yecookie.
I-cookie yekuki, njengoko inikezwe kweyakho umgaqo-nkqubo wabucala kunye nokusetyenziswa kweicookies.
Ikhukhi ye-Facebook, njengoko inikezwe kweyakho Inkqubo yekuki
IGoogle + kunye neMook cookies, njengoko kubonelelwe kwiphepha layo malunga nantoni Uhlobo lwe cookies ezisetyenzisiweyo
Pinterest cookie, njengoko inikezwe eyakho Umgaqo-nkqubo wabucala kunye nokusetyenziswa kweicookies
Icookie yeGravatar, njengoko kubonelelwe kuyo umgaqo-nkqubo wabucala wenkampani i-Automattic.
Okwangoku le ndawo inentengiso ye:
Adsense Google: Umgaqo-nkqubo wabucala kaGoogle Adsense - Imigaqo nemiqathango -Imigaqo-nkqubo yeNkqubo
Unxibelelwano: Umgaqo-nkqubo wabucala we-Adconion
Google DFP: Umgaqo-nkqubo wabucala we-Google DFP.
Abathengisi: Ipolisi yabucala ye-Buysellads - Imigaqo nemiqathango
Taboola: Umgaqo-nkqubo wabucala we-Taboola.
Uxanduva lomthetho kumxholo
Indawo inezicatshulwa ezilungiselelwe iinjongo zokufundisa okanye ezinokufundisa ezinokuthi zingabonakalisi imeko yangoku yomthetho okanye umthetho kwaye zibhekise kwiimeko ngokubanzi ukuze umxholo wayo ungaze usetyenziswe ngumsebenzisi kwiimeko ezithile.
Izimvo ezichazwe kuzo azibonisi izimvo ze-AB Internet Networks 2008 SL.
Umxholo wamanqaku apapashwe kule ndawo awunakuthathelwa ngqalelo, nakweyiphi na imeko, endaweni yengcebiso zomthetho.
Umsebenzisi akufuneki enze ngokwesiseko solwazi oluqulethwe kwisiza ngaphandle kokuya kuqala kwiingcebiso zobungcali ezihambelanayo.
Amalungelo obunini bemizi kunye nepropathi yamashishini
Ngale miQathango Jikelele, akukho lungelo lobukrelekrele okanye lepropathi yamashishini adluliselwe kwisango okanye nakweziphi na izinto zalo, ukuvelisa kwakhona, ukuguqula, ukuhambisa, unxibelelwano noluntu, ukwenza ukuba kufumaneke eluntwini, ukukhupha, ukusetyenziswa kwakhona, kuthintelwe ngokucacileyo kuMsebenzisi. ukugqithisa okanye ukusebenzisa naluphi na uhlobo, nangayiphi na indlela okanye inkqubo, yayo nayiphi na, ngaphandle kwaxa kuvunyelwe ngokusemthethweni okanye kugunyaziswe ngumnini wamalungelo ahambelanayo.
Umsebenzisi uyazi kwaye uyayamkela into yokuba iwebhusayithi iyonke, iqulethe kodwa ingagqibi okubhaliweyo, imifanekiso, uyilo, isoftware, umxholo (kubandakanya ulwakhiwo, ukhetho, ulungiselelo kunye nokunikezelwa kwento efanayo), izinto ezimanyelwayo kunye nemizobo, ikhuselwe Iimpawu zorhwebo, amalungelo okushicilela kunye namanye amalungelo asemthethweni abhalisiweyo, ngokungqinelana nezivumelwano zamazwe aphesheya apho iSpain iyinxalenye kunye namanye amalungelo epropathi kunye nemithetho yaseSpain.
Kwimeko apho umsebenzisi okanye umntu wesithathu ethathela ingqalelo ukuba kukho ukunyhashwa kwamalungelo abo asemthethweni epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ngenxa yokungeniswa komxholo othile kwindawo leyo, kufuneka bazise i-AB Internet Networks 2008 SL ngemeko enjalo, ebonisa:
Idatha yobuqu yomntu obandakanyekayo onamalungelo okutyholwa ukuba waphulwe umthetho, okanye chaza into ayenzayo xa ibango lakhe lisiwe ngumntu wesithathu ngaphandle komntu onomdla.
Chaza imixholo ekhuselweyo ngamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kunye nendawo ekuyo kwindawo, ukuqinisekiswa kwamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kubonisiwe kunye nesibhengezo esicacileyo apho iqela elinomdla linoxanduva lokuchaneka kolwazi olunikezwe kwisaziso.
Imigaqo kunye nokusonjululwa kwengxabano
Iimeko ezikhoyo zokusetyenziswa kwesiza zilawulwa ngandlela zonke ngumthetho waseSpain. Ulwimi lokubhala nokutolika kwesi saziso somthetho yiSpanish. Esi saziso sezomthetho asizukufakwa kumsebenzisi ngamnye kodwa siya kuhlala sifikeleleka kwi-Intanethi kwiwebhu.
Abasebenzisi banokungenisa iNkqubo yokuLungelelanisa abaThengi apho ii-Intanethi ze-Intanethi zika-2008 zika-SL ziya kuba yinxalenye yokusombulula nayiphi na impikiswano okanye ibango elifunyenwe kulo mbhalo okanye nakowuphi na umsebenzi we-AB Internet Networks 2008 SL, ngaphandle kokuxazulula ezo ngxabano zibangela ukukhula isenzo esidinga ubulungu, kwimeko apho umsebenzisi kufuneka aqhakamshelane nequmrhu elihambelanayo lombutho weear efanelekileyo.
Abasebenzisi abanesimo sabathengi okanye sabasebenzisi njengoko kuchaziwe yimigaqo yaseSpain kwaye bahlala kwi-European Union, ukuba babenengxaki ngokuthengwa kwi-Intanethi okwenziwe kwi-AB Internet Networks 2008 SL, ukuzama ukufikelela kwisivumelwano senkundla bangaya ukuya Iqonga lokusonjululwa kwempikiswano kwi-Intanethi, Yenziwe yi-European Union kwaye yaphuhliswa yiKhomishini yaseYurophu phantsi kwe Ummiselo (i-EU) 524/2013.
Ngaphandle kokuba umsebenzisi akangomthengi okanye umsebenzisi, kwaye xa kungekho mthetho unyanzelisa ngenye indlela, amaqela ayavuma ukungenisa kwiinkundla nakwiNkundla yamaTyala yenqila yaseMadrid, nanjengoko le yindawo yokugqitywa kwesivumelwano, ukurhoxisa ngokucacileyo elinye igunya elinokuhambelana nabo.
Yintoni esiyilindeleyo kubasebenzisi
Ukufikelela kunye / okanye ukusetyenziswa koku kuye nakubani na owenza imeko yoMsebenzisi, esamkela, ukusuka kulo mzuzu, ngokupheleleyo nangaphandle kokubekelwa bucala, esi saziso somthetho, kunye neemeko ezithile, apho kufanelekileyo, ziyazalisekisa, ubudlelwane kunye neenkonzo ezithile kunye nemixholo yesango.
Umsebenzisi uyaziswa, kwaye uyayamkela, into yokuba ukufikelela kule webhusayithi akuthethi, nangayiphi na indlela, ukuqala kobudlelwane bezorhwebo nee-Intanethi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL. Ngale ndlela, umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa iwebhusayithi, iinkonzo zayo kunye nemixholo ngaphandle kokuphula umthetho wangoku, ukuthembeka kunye nocwangco kuluntu. Ukusetyenziswa kwewebhusayithi ngeenjongo ezingekho mthethweni okanye eziyingozi, okanye nangayiphi na indlela, kunokubangela umonakalo okanye kuthintele ukusebenza kwesiqhelo kwewebhusayithi akuvumelekanga. Ngokubhekisele kwimixholo yale webhusayithi, akuvumelekanga:
Ukuzaliswa kwakhona, ukuhanjiswa okanye ukuguqulwa, ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye, ngaphandle kokuba banogunyaziso lwabanini babo abasemthethweni.
Nakuphi na ukuphulwa kwamalungelo omboneleli okanye abanini bawo ngokusemthethweni.
Ukusetyenziswa kwayo ngeenjongo zentengiso okanye yentengiso.
Amaphepha ewebhusayithi abonelela ngonxibelelwano kwezinye iiwebhusayithi kunye nomxholo ophethwe ngabantu besithathu, abavelisi okanye abathengisi.
Eyona njongo yamakhonkco kukubonelela uMsebenzisi ngamathuba okufikelela kunxibelelwano oluthiwe kunye nokwazi iimveliso zethu, nangona ii-Intanethi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL zingaxanduva nakweyiphi na imeko kwiziphumo ezinokuthi zifumaneke kumsebenzisi ngokufikelela amakhonkco athethiweyo.
Umsebenzisi onenjongo yokuseka nasiphi na isixhobo sekhonkco lobuchwephesha kwiwebhusayithi yakhe eya kwisango kufuneka afumane imvume ebhaliweyo yangaphambili ye-AB Internet Networks 2008 SL.
Ukusekwa kwekhonkco akuthethi nakweyiphi na imeko ubukho bobudlelwane phakathi kweeNethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL kunye nomnini wesiza apho ikhonkco lisekwe khona, okanye ukwamkelwa okanye ukuvunywa yi-AB Internet Networks 2008 SL yemixholo okanye iinkonzo zayo. .
Umsebenzi we ukumaketha okanye abaphulaphuli abafanayo be-AdWords basivumela ukuba sifikelele kubantu ababekhe batyelela iwebhusayithi yethu kwaye sibanceda ukuba bagqibezele inkqubo yabo yokuthengisa.
Njengomsebenzisi, xa ungena kwiwebhusayithi yethu, siza kufaka ikuki yokuphinda uthethe kwakhona (isenokuba ivela kuGoogle Adwords, eCriteo okanye kwezinye iinkonzo ezinikezela ukuphinda uthethe).
Le cookie igcina ulwazi lwendwendwe, ezinje ngeemveliso abazindwendweleyo okanye ukuba bayilahlile inqwelo yokuthenga.
Xa undwendwe lushiya iwebhusayithi yethu, icookie yokumaketha iyaqhubeka kwisikhangeli sabo.
Eminye imiqathango yokusetyenziswa kwale webhusayithi
Umsebenzisi uyavuma ukusebenzisa ngenkuthalo iwebhusayithi kunye neenkonzo ezifikelelekayo kuyo, ngokuthobela ngokupheleleyo uMthetho, amasiko amahle kunye nesi saziso somthetho.
Kwangokunjalo, iyenza, ngaphandle kokuba ngaphambili, ukuvakalisa kunye nokubhala ugunyaziso lwee-Intanethi ze-Intanethi zika-2008 zika-SL zokusebenzisa ulwazi oluqulathwe kwiwebhusayithi, ngokukodwa kulwazi lwakho, ukungabinakho ukwenza ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ukuxhaphaza imixholo ekukuyo ukufikelela.
Le ndawo igcina ifayile yedatha enxulumene nezimvo ezithunyelwe kule ndawo. Ungawasebenzisa amalungelo akho okufikelela, ukulungisa, ukurhoxisa okanye ukuchasa ngokuthumela i-imeyile kwidilesi yoqhakamshelwano (at) actualblog (dot) com.
Le ndawo, imimandla enxulumene nayo kunye nobunini bomxholo ngowama-AB Internet Networks 2008 SL.
Le webhusayithi inama-hyperlink akhokelela kwezinye iiwebhusayithi ezilawulwa ngabantu besithathu ngaphandle kombutho wethu. Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB ze-2008 SL aziqinisekisi kwaye azinoxanduva lomxholo oqokelelweyo kumaphepha ewebhu athethiweyo.
Ngaphandle kokuba kucaciswe, kugunyaziswe kwangaphambili kwaye kubhalwe ugunyaziso lwe-Intanethi ye-AB ka-2008 SL, ukuvelisa kwakhona, ngaphandle kokusetyenziswa ngasese, ukuguqulwa, kwaye ngokubanzi nayiphi na enye indlela yokuxhaphaza, ngayo nayiphi na inkqubo, yayo yonke okanye inxalenye yomxholo kule webhusayithi.
Akuvunyelwe ngokungqongqo ukwenza, ngaphandle kwemvume yangaphambili ye-AB Internet Networks 2008 SL, nakuphi na ukukhohlisa okanye ukuguqula le webhusayithi. Ngenxa yoko, ii-Intanethi ze-Intanethi ze-AB ze-2008 SL ziya kuthatha naluphi na uxanduva olufunyenweyo, okanye olunokuthi luvele, kutshintsho olwenziweyo okanye ekuphathweni ngabantu besithathu.
Umsebenzi wamalungelo we-ARCO
Ungazilolonga, ngokubhekisele kwidatha eqokelelweyo, amalungelo amkelwe kwi-Organic Law 15/1999, yokufikelela, ukulungiswa okanye ukurhoxiswa kwedatha kunye nenkcaso. Ngesi sizathu ndiyakwazisa ukuba uya kukwazi ukusebenzisa la malungelo ngesicelo esibhaliweyo nesisayiniweyo ongasithumela, kunye nefotokopi yesazisi sakho okanye uxwebhu olufanayo lokuzazisa, kwidilesi yeposi ye-AB Internet Networks 2008 SL okanye nge-imeyile, iqhotyoshelwe ikopi yesazisi ku: (kwi) ubunyani bebhlog (ichaphaza) com. Ngaphambi kweentsuku ezili-10 siya kuphendula kwisicelo sakho sokuqinisekisa ukwenziwa kwelungelo olicelileyo ukuba ulisebenzise.
Ukukhutshelwa ngaphandle kwesiqinisekiso kunye noxanduva
Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 i-SL ayiniki nasiphi na isiqinisekiso kwaye ayinaxanduva, kuyo nayiphi na imeko, kumonakalo walo naluphi na uhlobo onokubangelwa:
Ukungabikho kokufumaneka, ukugcinwa kunye nokusebenza okusebenzayo kwewebhusayithi okanye iinkonzo zayo kunye nemxholo;
Ubukho bentsholongwane, iinkqubo ezingalunganga okanye eziyingozi kwimixholo;
Ukusetyenziswa okungekho semthethweni, ukungakhathaleli, ubuqhetseba okanye ngokuchaseneyo nokusetyenziswa kwesi Saziso siSemthethweni;
Ukungabikho komthetho, umgangatho, ukuthembeka, ukulunga kunye nokufumaneka kweenkonzo ezibonelelwe ngabantu besithathu kwaye zenziwe zafumaneka kubasebenzisi kwiwebhusayithi.
Iinethiwekhi ze-Intanethi ze-AB zika-2008 SL azinaxanduva phantsi kwazo naziphi na iimeko zomonakalo onokuthi uvele ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kwale webhusayithi ngokungekho mthethweni.
Iqonga laseYurophu lokusombulula iimbambano kwi-Intanethi
IKhomishini yaseYurophu ibonelela ngeqonga lokusombulula iimpikiswano kwi-Intanethi elifumaneka kule linki ilandelayo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Abathengi baya kuba nakho ukungenisa amabango abo ngokusebenzisa iqonga lokusombulula iimpikiswano kwi-Intanethi
Umthetho osebenzayo kunye noMthetho
Ngokubanzi, ubudlelwane phakathi kwe-AB Internet Networks 2008 SL kunye nabasebenzisi beenkonzo zayo ze-telematic, ezikhoyo kule webhusayithi, ziphantsi komthetho waseSpain nolawulo.
Siya kuhlala sifikeleleka: Ukuqhagamshelana kwethu
Kwimeko apho nawuphi na umsebenzisi enayo nayiphi na imibuzo malunga nale miqathango yomthetho okanye naluphi na uluvo malunga ne-portal, nceda uye kunxibelelana (kwi) actualityblog (dot) com.
Ukwamkelwa kunye nemvume
Umsebenzisi uxele ukuba wazisiwe ngemeko zokukhuselwa kweenkcukacha zobuqu, ukwamkela kunye nokuvuma unyango lwabo yi-AB Internet Networks 2008 SL, ngendlela nangeenjongo ezichaziweyo kulo mgaqo-nkqubo wabucala.
Ngokuhambelana nomthetho wangoku, i-AB Intanethi ye-Intanethi ka-2008 SL ayenzi zenzo ze-SPAM, ke ayithumeli ii-imeyile zorhwebo ezingazange zicelwe ngaphambili okanye zigunyaziswe ngumsebenzisi. Ngenxa yoko, kwifom nganye kwiwebhu, uMsebenzisi unethuba lokunika imvume yakhe yokufumana iNcwadana / incwadana, nokuba loluphi ulwazi oluceliweyo.